आर्थिक Archives – Page 217 of 231 – Samacharpati
खोटाङ जिल्लामा एकैसाथ प्रहरीका सात भवन निर्माणाधीन
खोटाङ, १९ कात्तिक । जिल्लामा एकैसाथ सात ठाउँमा प्रहरी भवन निर्माण भइरहेका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालयको आवासगृह, इलाका प्रहरी कार्यालय ऐसेलुखर्क, मात्तिमबिर्ता, प्रहरी चौकी देवीस्थान, रतन्छा, च्यास्मिटार र बुइपाको कार्यालय भवन निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक एवं प्रवक्ता आमोदकुमार खेरवारका अनुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालयको आवासगृह ४८ प्रतिशत, इलाका प्रहरी कार्यालय ऐसेलुखर्क […]
बाजुराको बडीमालिकामा असिनापानीले अन्नबाली नष्ट
मार्तडी, १९ कात्तिक । बाजुराको बडीमालिका नगरपालिका–१ मा असिनापानीले पाक्न लागेको अन्नबाली, तरकारी र फलफूल खेतीमा क्षति पुर्याएको छ । स्थानीयवासी कृषक हर्कबहादुर कार्कीका अनुसार सोमबार अपराह्न ४ः०० बजे आएको असिनापानीले पाक्न लागेको कोदो, फापर, धान, सुन्तला, केरा र तरकारी बालीमा क्षति पुर्याएको छ । उहाँले वडाको पिनालेख, पाटा, नुवाकोट र सल्लेनाका करीब एक हजार […]
काभ्रेपलाञ्चोक, १९ कात्तिक । पाँचखाल नगरपालिकाले मापदण्डविपरीतका इँटा उद्योग यथास्थितिमिा सञ्चालन नगर्न व्ययसायीलाई पत्राचार गरेको छ । नगरपालिकाले उद्योगीलाई पत्राचार गरी इँटाभट्टा व्यवस्थित गरी वातावरणमैत्री बनाउन आग्रह गरेको हो । इँटा उद्योग मापदण्ड तथा नगरपालिकाद्वारा निर्माण वातावरण ऐनअनुसार उद्योग सञ्चालन गर्न उद्योगीलाई पत्राचार गरेको नगरप्रमुख महेश खरेलले बताउनुभयो । “पाँचखालमा मापदण्डविपरीतका इँटा उद्योग यथास्थितिमा सञ्चालन नगर्न […]
पर्वत, १९ कात्तिक । जिल्लाको ‘लाइफलाइन’ मानिएको कालीगण्डकी करिडोरको फलेवासदेखि अर्मादीसम्मको काम लामो समयदेखि अलपत्र परेको छ । दुई वर्षअघि नै ट्र्याक खुलिसक्नुपर्ने सडक अलपत्र परेपछि कालोपत्र गर्ने कार्यसमेत पछि धकेलिने भएको छ । निर्माणको काम गर्ने जिम्मा लिएको सूर्य कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले काम अलपत्र छाडेर हिँडेको छ । विसं २०७३ असार २२ मा सम्झौता भई २०७५ […]
पोखरा, १८ कार्तिक । पोखरा महानगरपालिका वडा नं. १७ छोरेपाटनमा रहेको अमले वचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले नवौं स्थापना दिवसको अवसरमा मानव सेवा आश्रम छोरेपाटनलाई सहयोग गरेको छ । आइतबार आयोजित एक कार्यक्रममा सहकारीका संस्थापक अध्यक्ष ले. धर्मदत्त तिमिल्सिनाले आश्रमका संयोजक राजन सापकोटालाई नगद तथा जिन्सी सामाग्री हस्तान्तरण गरेका थिए । सो अवसरमा सहकारीका संस्थापक […]
बैतडी, १८ कात्तिक । जिल्लाको एक सामुदायिक विद्यालयले रू ७० हजार बराबरको मैनबत्ती बिक्री गरेको छ । पाटन नगरपालिका–९ स्थित सिद्धेश्वर मावि हुक्केडाँडाका विद्यार्थीले विद्यालयमै उत्पादन गरेको मैनबत्ती बिक्रीबाट सो आम्दानी भएको हो । कक्षा ६ देखि ८ सम्म अध्यापन हुने ‘पेशा व्यवसाय र प्रविधि शिक्षा’ पाठ्यक्रमअन्तर्गत प्रयोगात्मक कक्षामा विद्यार्थीहरुले मैनबत्ती उत्पादन गर्दै आएका छन् । […]
बेत्रावती, १८ कात्तिक । नुवाकोट निर्वाचन क्षेत्र नं १ का सांसद हितबहादुर तामाङले ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ अन्तर्गत प्राप्त रु छ करोड बजेट विभिन्न २९ योजनामा बाँडफाँट गर्नुभएको छ । कार्यक्रम निर्देशक समितिको विदुरमा आइतबार बसेको बैठकले निर्वाचन क्षेत्र नं १ का विभिन्न सात वटा गाँउपालिकाबाट माग भएर आएका तथा आवश्यकताको आधारमा विनियोजन हुने गरेर […]
बागलुङमा धावनमार्ग कालोपत्र गर्न चार करोड विनियोजन
गलकोट, १८ कात्तिक । बागलुङको बलेवा विमानस्थल बाह्रै महिना सञ्चालन गर्न विमानस्थलको (रनवे) कालोपत्रे गरिने भएको छ । धावनमार्गका लागि यो आर्थिक वर्षमा रु चार करोड विनियोजन गर्ने निर्णय भएको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ । छब्बीस वर्षदेखि बन्द अवस्थामा रहेको विमानस्थल बागलुङ नगरपालिकाको संयोजनमा २०७४ चैत्र ९ गतेबाट पुःन सञ्चालन भएर नेपाल एयरलाइन्स तथा तारा […]
बागलुङमा विदेशी पर्यटक बढ्न थाले
गलकोट, १८ कात्तिक । बागलुङ बजारमा विदेशी पर्यटक । विश्व भेगन अर्गनाइजेशन तथा बागलुङ नगरपालिकाको संस्थागत साझेदारीपछि बागलुङमा विदेशी पर्यटक बढ्न थालेका छन् । तस्वीरः खेमराज गौतम